Daafaca Sead Kolašinac oo la sheegay inuu AC Milan caafimaadka u mari doono isla marka la saxiixo heshiiska iibka 14-ka Abriil – Gool FM
Daafaca Sead Kolašinac oo la sheegay inuu AC Milan caafimaadka u mari doono isla marka la saxiixo heshiiska iibka 14-ka Abriil
Raage March 31, 2017
HAMBURG, GERMANY - DECEMBER 20: Sead Kolasinac of Schalke in action during the Bundesliga match between Hamburger SV and FC Schalke 04 at Volksparkstadion on December 20, 2016 in Hamburg, Germany. (Photo by Oliver Hardt/Bongarts/Getty Images)
(Gilcenkirchen) 31 Maarso 2017 – Kooxda AC Milan ayaa haatan u muuqata mid usii dhowaanaysa maalin taariikhi ah oo ay is bedeleyso milkiyadeedii soo taxnayd muddo 31 sanadood ah, ka gadaal markii xal loo helay lacagtii lagu iibsan lahaa.
Sida ku dhigan Tuttosport, mid ka mid ah tillaabooyinka ugu horreeya ee ay AC Milan qaadayso kaddib saxiixa oo ku beegan 14-ka bisha Abriil, waxay noqon doontaa in Talyaaniga la keeno daafaca Schalke 04 ee Sead Kolasinac oo deetana caafimaadka la mariyo heshiis cusubna laga saxiixo si looga fursado fashilka ku dhacay dalabkii loo diray Dahoud oo oo Borussia Dortmund doortay kaddib markii uu baaqday heshiiska Milan 3-dii Maarso.
Laacibkan daafaca dadabka bidix ka dheela oo 23-jir ah, una dhashay Bosnia ayuu qandaraaskiisu dhamaan doonaa xagaaga soo aaddan sidaa darteedna fasax ugama baahna kooxdiisa, balse waxaa sidoo kale doonaya kooxo kale, balse waxaa la sheegayaa inuu heshiis afka ah kula jiro maareeyayaasha cusub ee Milan qaban doona, iyadoo ay xagaagii laacibka aad u doonaysay Juventus.
HAMBURG, GERMANY – DECEMBER 20: Sead Kolasinac of Schalke in action during the Bundesliga match between Hamburger SV and FC Schalke 04 at Volksparkstadion on December 20, 2016 in Hamburg, Germany. (Photo by Oliver Hardt/Bongarts/Getty Images)
Antonio Conte oo la sheegay inuu Chelsea ka tegi karo!
BANDHIGGA XAAJI: KU CELIS....Danjire Maxamed Cali Ameeriko side isku yihiin ciyaaraha kooxdee ayuuse taageeraa & qodobadii xiisaha iyo la yaabka xambaarsanaa.